Daawo Sawiro: Mid ka mid ah masaajidaa ugu qadiimsan Caasimada Muqdisho oo la dayactiray, xarigana laga jaray!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawiro: Mid ka mid ah masaajidaa ugu qadiimsan Caasimada Muqdisho oo la dayactiray, xarigana laga jaray!!
Daawo Sawiro: Mid ka mid ah masaajidaa ugu qadiimsan Caasimada Muqdisho oo la dayactiray, xarigana laga jaray!!
Oct 19, 2016WARAR
Masaajidka Arbaca Rukun oo ka mid ah masaajidada ugu qadiimsan magaalada Muqdisho ayaa maanta xariga laga jaray kadib markii ay u dhis xoogan ku sameysay dowlada Turkiga.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo danjiraha Turkiga u jooga Somalia ayaa si wadajir ah xariga uga jaray masjidkan oo ku yaalla degmada Xamar weyne agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Masaajidkan ayaa ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Muqdisho sanadkii 1992-kii, muddo badana laguma cibaadeysan, waxaana masjidka loo dayactiray hab casri ah oo aad u qurux badan.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlayey munaasabad kooban oo loo sameeyey furitaanka masjidkan ayaa uga mahad celiyey dowlada Turkiga dhismaha masjidkan, isagoo ka sheekeeyey taariikhda masjidka iyo marxaladihii uu soo maray.
Dajiraha Turkiga ayaa isna sheegay in dowladiisu ay sii wadeyso mashaariicda dib u dhis iyo kuwa horumarineed ee ay dalka ka wado, wuxuuna xusay in dayactirka iyo dhismaha goobaha cibaabada ay tahay wax ILAAHAY loogu dhowaado.
Previous PostMarwada Madaxweynaha Hooyo Sahra oo kaalmo lacageed gaarsiisay fanaanka caanka ee Cabdi Tahliil!! Next Postwareysi xiiso leh: halyeey Galan oo Ka waramay Awooda Ciidankiisa, Xiisad kala dhaxaysa C.wali gaas, kana hadlay dagaalka magaalada Gaalkacyo!!